Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း
1 Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 13th January 2010, 7:08 pm
ဒီနေ့လည်းဗျာ ကျွန်တော် NetGear Wireless Access Point (g) တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ ကြိုးစားကြည့်တယ်ဗျာ။
၁။ ကျွန်တော် WAP Point (Edimax) ကနေ လွှင့်ထားတဲ့ဟာကို NetGear WAP ကနေဖြတ်ပြိး repeat လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
၂။ အရင်ဆုံး NetGear နဲ့ ကျွန်တော့် laptop ကိုချိတ်လိုက်ပါတယ်။
Network Card Setting ထဲမှာ သူပြောထားတဲ့ အတိုင်း 192.168.0.210 subnet mark 255.255.255.0 ထည့်ပြီး ချိတ်လိုက်ပါတယ်။
Net Gear Ip ကို browser ထဲမှာ 192.168.0.227 ဆိုပြိးထည့်လိုက်တယ်။
admin password ထည့်လိုက်တယ်။ setting ချိန်ဖို့ပေါ်လာတယ်။
အဲသည်မှာ စတာပဲ။ MAC Address နဲ့ Repeator mode ကိုပြောင်းရင် remote Ip ကိုထဲ့ခိုင်းတယ်။
Netstembler နဲ့ Edimax MAC Address ကိုရှာလိုက်တယ် Edimax WAP က (Office) လို့ဆိုပါဆို့။
ပေါ်လာတဲ့ MAC Address ကို Net Gear ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ Channel မတူဘူးချိန်ပေးပါဆိုလို့ချိန်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အောက်မှာ client Ip ထဲ့ဆိုလို့။ နဂို Edimax ကနေ server ကိုချိတ်ထားတဲ့ Ip နဲ့တူအောင် 10.1.110.90 subnet 255.255.254.0 gateway 10.1.110.server ကိုထည့်လိုက်တယ်။
၃။ Save လုပ်ပြီးတော့။
Laptop က wifi ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ wireless view ထဲကနေ Netgear ဆိုတာကြီးကိုမြင်တော့ချိတ်လိုက်ကော ပြီးတော့ wifi card က ip ကို လဲ Netgear မှာပေးခဲ့တဲ့ client ip 10.1.110.90 subnet 255.255.254.0
gateway 10.1.110.server ထဲ့လိုက်တယ်။ Browser Setting ထဲမှာ 10.1.110.server ကိုထည့်ပြိးချိတ်တာ မရဘူးဗျာ။ တစ်ခုခုတော့လွဲနေတယ်ထင်တယ် သိသူများရှင်းပေးကြပါဗျာ။
2 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 13th January 2010, 7:10 pm
ကျွန်တော်ကတော့ wireless ဆိုဟီး မြင်တောင်မမြင်ဖူးဘူးဆိုတော့
ရှင်းပြလို့တတ်ဘူး သိသူများ ရှင်းပြပေးပါ
3 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 14th January 2010, 8:09 am
အဲဒီ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းနှံ့စပ်မယ့်သူတစ်ယောက် ရှာလာခဲ့ပါဦးမယ်။
လောလောဆယ်တော့ ကျနော်လည်း မဖြေတတ်ဘူး။
ဖိုရမ်ထဲက ဆရာတွေဖြေပေးသွားရင်တော့ ကျနော်လည်း ရှာစရာလိုတော့ဘူးပေါ့။
ကို Deep ကလည်း ၊ သူရေးပေးမှ Network အကြောင်းတတ်မှာပါဆို။ သူကပြန်မေးနေတယ်။ လူဇိုး...
4 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 14th January 2010, 5:21 pm
မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ Edimax နဲ့ match မဖြစ်လို့လားလို့ပါဗျာ။
5 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 14th January 2010, 5:56 pm
ကျနော်ကလည်း Network ဆိုဘာမှကို စိတ်မ၀င်စားလို့ သင်ပေးတုန်းက သေချာမသင်ခဲ့ဖူးတော့ ဖြေတတ်ဘူးဂျ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတော့ ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီး ခေါ်ထားတယ်။
အဲဒီ့အစ်ကိုကတော့ NE ကျွမ်းမယ်ထင်တယ်။ သူလာရင် အစ်ကိုနဲ့ တိုင်ပင်ဖော်ရနိုင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်ကတော့ ဒီမှာ NE သမား သိပ်မတွေ့သေးဘူး။
6 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 14th January 2010, 7:04 pm
Network ထဲမှာ client တိုင်းက static IP နဲ့သုံးလား ? DHCP နဲ့သုံးလား ? Wifi card ကို ကိုယ့်ဟာကို IP ပေးတာတွေ့လိုက်လို့။
ပြီးတော့ wifi card က ip ကို လဲ Netgear မှာပေးခဲ့တဲ့ client ip 10.1.110.90 subnet 255.255.254.0
ဒီလိုဆိုရင် Edimax ရယ် Netgear ရယ် Notebook ရယ်မှာ IP တစ်ခုထဲဖြစ်နေသလိုပဲ။
ကျနော်မေးထားတာလေးတွေ ဖြေရင်း တိုက်ကြည့်လို့ရအောင် ကျနော် scenario တစ်ခုပြောမယ်ဗျာ။ AP to AP ကို repeater mode ချိတ်တာပဲ။
MAC : AA:AA:AA:AA:AA:AA
SSID : WirelessNet
AP2 မှာဆိုရင် repeater mode ဆိုရင် AP1 ရဲ့ Wireless MAC address ကိုပေးရပါတယ်။ LAN card ရဲ့ MAC address ပေးမိရင် မရပါဘူး။ SSID ကမတူလည်းရပါတယ်။ IP က subnet တူရင်ရပါတယ်။ IP တူလို့မရပါဘူး။ ဒါဆို AP2 conf က ဒီလိုဖြစ်မယ်။
MAC : BB:BB:BB:BB:BB:BB
SSID : NetWireless
MODE : Repeater ( AA:AA:AA:AA:AA:AA)
ဒီ network ထဲမှာတော့ DHCP ရှိတယ်လို့ သဘောထားလိုက်မယ်။ ဒါဆို Notebook က NetWireless ကိုချိတ်လိုက်ရင် AP1 ကနေတစ်ဆင့် DHCP ကနေ IP / Subnet / Gateway / DNS address တွေရမယ်။ Notebook ကရမယ့် IP က AP1 & AP2 ရဲ့ IP တွေနဲ့တူမှာမဟုတ်ဖူး။ Gateway Address & DNS ကရထားပြီးသားမို့ network ထဲမှာ proxy server မရှိရင် Browser setting မှာ proxy ပေးစရာမလိုပါဘူး။ အ
Troubleshooting ကတော့ connection ရပြီးရင် AP တွေရဲ့ IP တွေ၊ Gateway IP၊ Server IP တွေကို အဆင့်ဆင့် ping ကြည့်ပေါ့။
DHCP မရှိရင် လည်း Notebook က AP တွေ Server တွေနဲ့ subnet တူတယ့် IP တစ်ခုခု ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ AP က repeater mode support လုပ်တယ်ဆိုရင် ရမှာပါ။ brand မတူလို့ မရတာမျိုးတော့ ကျနော်မဖြစ်ဖူးဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဖူးလို့တော့ မပြောပါဘူး။ မဖြစ်ဖူးဘူး။
7 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 14th January 2010, 7:29 pm
၂ ယောက် ၃ ယောက်လောက် ခေါ်ထားတာ။ တစ်ယောက်တော့ ရောက်လာပြီ။
ကျနော့်ရဲ့ လက်ကလိထားမှုကြောင့် စာတွေ ၂ ခါပြန်ရိုက်လိုက်ရတဲ့အတွက်တော့ ကျနော်ကဘဲ တောင်းပန်ပါတယ်။
တစ်ခြား မေးတာတွေရှိလည်း ဖြေပေးဦးနော်။
8 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 18th January 2010, 4:42 pm
ကိုxtrm ရေချက်ချင်းအကြောင်းမပြန်ဖြစ်တာခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ ဒီနေ့မှပြန်သုံးဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်ပါ့မယ်။
9 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 19th January 2010, 6:50 pm
Network ထဲမှာ Proxy Server လဲရှိတယ်ဗျာ သူ့ address က 10.1.110.3 ဆိုပါတော့။
Access Point က Edimax Point ဗျာ သူ့ကိုဆင်ထားထာက ဂလိုဗျ။
SSID: Building B
MODE: Universal Repeator Mode
DHCP: Disiable တဲ့ဗျာ
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ Netgear Access point ကိုထပ်တပ်ပြီး repeat လုပ်ချင်လို့။
သူ့ကိုမသုံးခင် အရင်က အင်တာနက်ဆက်တင်က
browser proxy မှာ 10.1.110.3 8080
wifi IP မှာ static ip 10.1.110.17
preferred DNS: 10.1.110.3
Alternated DNS: 203.81.64.20 (MPT)
ခု Netgear ထပ်တပ်ဖို့ပါ။
ကျွန်တော် netgear setting မှာ ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်။
10 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 19th January 2010, 6:58 pm
ipsetting မှာ ip ကို သူ့အတိုင်းထားပြီး gateway ကို 10.1.110.3 ပေးလိုက်တာ ဒီလိုတက်လာတယ်
အဲဒါနဲ့ gateway ကိုပြန်ဖြုတ်ထားတယ်။
advence wireless setting:
advanced wireless bridging:
11 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 19th January 2010, 7:15 pm
ဟိုက်။ အဲဒါမှ ဒုက္ခဘဲ။ ကျနော်ကလည်း မလုပ်ဖူးတော့ မဖြေတတ်ဘူးရယ်
ကို xtrm ကိုက Online မှာလည်း မတွေ့သေးဘူး။
ခဏနော်။ တခြားသိမယ့်သူ အခု သွားရှာကြည့်ပေးမယ်။
တွေ့ရင် အကြောင်းပြန်မယ်နော်။ မတွေ့ရင်တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်မယ်။
12 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 20th January 2010, 9:08 pm
ဒီည ဝင်တော့ကြည့်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် img တွေကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ
$ƴǩǾ ရေ ကြည့်လုပ်အုန်း
ကျနော် နေ့လည်ဆို online ရှိပါတယ် ။ project တစ်ခုအတွက် environment တစ်ခုကို နောက်က ကျားလိုက်နေသလို setup လုပ်နေရလို့ offline လုပ်ပြီးပုန်းပုန်းနေလို့ဗျာ။
ကျနော် img တွေမမြင်ရဘူး။ အလျင်လိုနေရင်တော့ စာဖတ်ပြီး တွေ့သလောက်နဲ့ပဲ ပြောရတော့မယ်။
10.1.110.3 က Squid or ISA ထင်တယ်နော်။ ဒါမှမဟုတ် wireless router ဖြစ်မယ်။
Edimax ကိုယ်က repeater ပါ။ အရင်က ဒီတိုင်း edimax ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ရင် Static IP ပေးရလား ၊ DHCP ကပေးလားဗျာ ?
Repeator ကို repeat ပြန်လုပ်ဖို့က Signal str2တုန်းလောက် အနည်းဆုံးမိရပါမယ်။ အနည်းဆုံးပါ။ မဟုတ်ရင် မရဖို့များပါတယ်။
Netgear ဘက်ကဟာတွေက img တွေဆိုတော့ ကျနော်မမြင်ရတော့ဘူး။ ဒီလို steps လိုက်လေးလုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား ?
1. Edimax ကို direct ချိတ်ပါ။ Network connection ရရင် ( DHCP ဆိုရင် ) IP တစ်ခုခုကို ping ကြည့်ပါ။ Assigned မလုပ်ရသေးတာတစ်ခုကို မှတ်
( Edimax မှာ MAC filtering တော့ မရှိပါဘူးနော် ? ရှိရင်တော့ ဒီမှာတင် ရပ်လို့ရပြီ။ )
2. Netgear ကို Edimax နဲ့ channel တူအောင်ပေးပါ။ SSID မတူအောင်ပေးပါ။ DHCP support လုပ်ရင် ပိတ်ပါ။ AP ဆိုရင်တော့ DHCP support လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
( Netgear ပေါ်မှာ Authentication / Wireless security ကိုနောက်ဆုံးမှလုပ်ပါ။ စစချင်း open wireless အဖြစ်ပဲ ထားပြီး စမ်းတာပိုကောင်းပါတယ်။)
3. Repeator အနေနဲ့ configuration မှာ Edimax MAC add ပေးပါ။
4. Netgear ရှိတယ့် နေရာကနေ notebook နဲ့ Edimax ကိုချိတ်ကြည့်ပါ။ ရရင် ... IP add ရရင် web surf ကြည့်ပါ။ Browser ကတော့ လိုသလိုပေါ့ဗျာ။ ရရင် နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆက်။ မရရင်တော့ signal str မကောင်းလို့
5. Notebook ကို Edimax ကနေဖြုတ်ပြီး Netgear ကိုချိတ်ကြည့်ပါ။ ပိုပြီးလွယ်ကူအောင် Netgear မှာ cable အပေါက်ပါ ပါရင် Cable နဲ့တာအရင်ချိတ်။ မပါရင်တော့ Wireless ချိတ်ပေါ့။ Wireless က key လည်းမလိုဘူး၊ SSID ကလည်းမတူတော့ မှားစရာတော့မရှိပါဘူး။
ဒီလို လုပ်လို့ ၊ ဒီနေရာကနေပဲ Edimax ကိုချိတ်တုန်းကရတယ်၊ Netgear ကိုချိတ်မှမရတာဆိုရင် netgear configuration မှာ လိုနေတာပါ။ Img တွေမြင်ရရင်တော့ ကူညီနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
စမ်းကြည့်ပြီးသား troubleshooting steps လေးတွေပြောပေးနိုင်ရင် ဝိုင်းစဉ်းစားပေးရတာ ဘောင်ပိုကျင်းမယ် ထင်တယ်
( ဒီတစ်ခါလည်း logout timer ထိပြန်ပြီ။ ခုမှကြည့်မိတယ်။ ဘာ img မှမမြင်ရဘူး။ ဒီမှာတင်မဟုတ်ဖူး)
13 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 21st January 2010, 7:16 pm
netgear မတပ်ခင်က edimax wap ကို ချိတ်ပြီး dhcp နဲ့ပဲလွှတ်ထားရင်ရတယ် static ပေးရင်လဲရတယ်။
netgear ကြားမှာထပ်ခံဖို့လုပ်တာ နဲနဲနေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလဲလိုချင်လို့ edimax channel က2အထက်ကိုမိတယ်။ edimax mac filter မရှိဘူး။ edimax wap နောက်တစ်လုံးနဲ့ထပ်ခံရင်တော့ရတယ်
netgear ကိုပဲသုံးချင်လို့။ netgear နဲ့ notebook ကို cable ပဲချိတ်ချိတ် wireless ပဲချိတ်ချိတ်မိတယ်။
ပြသနာတက်နေတာက netgear ကိုဖြတ်ပြီး ဘယ်လိုမှ internet သုံးလို့မရဘူး။
proxy မှာက squid သုံးထားတာပါ။ ပုံတွေကမြင်ရပါတယ်ဗျ။ ဒီလိုလုပ်ပုံတွေကို မေးထဲပို့ပေးလိုက်မယ်လေ။
mail address ပေး။
14 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 21st January 2010, 7:20 pm
repeater အနေနဲ့ edimax mac address ကိုလဲထဲ့ပေးပြီးပြီ ssid မတူအောင်လဲထားတယ်။
ပြသနာက dhcp ကိုပိတ်တာပဲ။ gateway ip မတူလို့ တူအောင် ip class ညှိပေးတယ် အဲဒါလဲမရဘူး။ အင်တာနက်က။
dhcp ကိုဖွင့်ပြီး စမ်းတော့ gateway ထဲ့လို့မရဘူးလေ။
15 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 22nd January 2010, 11:32 am
xtrm wrote: ဒီည ဝင်တော့ကြည့်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် img တွေကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုရေ။ တောင်းပန်ပါတယ်။
Permission တွေကို ကျနော် ပြန်မစစ်ရသေးဘူးလေ။ Permission တွေက Attacker တို့ လုပ်ထားတာမို့လုိ့ပါ။
အခု ပြန်ကြည့်ပြီး ပြင်နေပါတယ်။
16 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 22nd January 2010, 3:27 pm
ကို deep ၊ IP settings မှာ IP က same network ထဲကဖြစ်ရပါမယ်။ Edimax ဖတ်က IP နဲ့၊ Netgear ရဲ့ IP က network တူမှရမယ်။ Gateway က 10.x.x.x ဆိုရင် IP လည်း 10.x.x.x ထဲကမှရမယ်။ Subnet mask လည်း တူမှ။
DHCP က server မှမပါတာ။ Client ပဲ။ On ပြီးလည်းစမ်းကြည့်ပါအုန်း။
STP setting ပိတ်လိုက်ပါ။ STP က တစ်ခါတလေ ဒုက္ခပေးတယ်။
17 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 22nd January 2010, 3:45 pm
အိုင်ပီ setting က ရိုးရိုးအိုင်ပီsetting ထဲကလား advance setting ထဲကလား။ advanced wireless setting ထဲမှာက client mode ပါနေတယ်လေ ကျွန်တော်အဲသည်ထဲကဟာကိုစမ်းရမှာလား။
browser setting ထဲက proxy မှာ gateway ip 10.1.110.3 8080 ပဲပြန်ပေးရမှာလား။
18 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 22nd January 2010, 9:09 pm
LAN gateway is not configured correctly ဆိုတယ့်နေရာ
Setup အောက်က IP settings
19 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 30th January 2010, 1:32 pm
ကျွန်တော် Loadblacing Router Linksys ကိုသုံးထားတာရှိတယ် အဲသည်ကနေပဲ ကြိုးနဲ့ Netgear ကိုချိတ်ပြီး
Netgear ကို Access Point အနေနဲ့ပဲသုံးလိုက်တော့မယ်ဗျာ။
ကိုxtrm အားရင် လူကိုယ်တိုင်ကူညီပေးပါလားဗျာ။
20 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 8th July 2010, 5:55 pm
တညျနရော : in front of monitor
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-07-08
Netgear ကို Client Mode ထားပြီး Wireless Router နဲ့ ပြန်ချိတ်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေမလားဘဲ.....စရိတ်ကတော့ ကောင်းသွားမှာပေါ့. [You must be registered and logged in to see this image.] .....WAP(Edimax)>Wireless>ClientMode (Netgear)>Wire>WAP (some brand)>Wireless>computers.........
Bro ရဲ့ Print Screen ကို ကြည့်ကြည့်တော့ Client Mode က ကျွန်တော့် တွေ့ဖူးတဲ့ Client Mode လို Site Survey တို့ဘာတို့တော့ မပါဘူးဗျ..netgear ရဲ့ Client Mode Function က အဲ့ဒီလို လုပ်လို့ရပါ့မလားတော့ သေချာမပြောတတ်ဘူး....SMC WEBxxx ကတော့ လုပ်နိုင်တယ်...
ဒါနဲ့ တစ်ခု မေးချင်လို့.........အဲ့ဒီ Netgear ကဘယ်က၀ယ်တာလဲ Bro......ကျွန်တော်လည်း Site တစ်ခုမှာ Client Mode ပါတဲ့ Wireless Router ကို သုံးချင်လို့.......Belkin Range Extender နဲ့ သုံးဖူးတယ်...ရတော့ရတယ်.....ဒါပေမယ့် တော်တော် ကြောင်လို့...........Config ချရတာကိုနေ့တ၀က် ကုန်တယ်......Browse ရတချက်.......မရတချက်နဲ့..........တော်တော်ဆိုးတယ်........ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့ ပုံစံက အိမ်ယာရဲ့ အလယ်ကနေ 12 dbi Omin နှစ်ချောင်း နဲ့ လွှင့်မယ်.......ပြီးရင် အိမ်တွေကနေ Client Mode ပါတဲ့ Wireless Router နဲ့ ပြန်ဖမ်းပြီး Computer တစ်လုံးဆီ ကြိုးနဲ့ ပြန်သွားချင်တာ.......ဒီလိုလေ 12dbi Omini Outdoor Access Point>Wireless>WirelessRouter(ClientMode)>Wire>Computer.............အဲ့ဒီ Wireless Router (Client Mode) မှာ ဘာ Brand သုံးရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဗျ........Thanks in advance4ur answer........ [You must be registered and logged in to see this image.]
21 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 31st July 2010, 11:54 pm
Cisco and or linksys သုံး ပေါ့ .. မဟုတ် ရင် Trandnet သုံးပေါ့ .. ဒါ ပေမယ့် cisco ပိုအားပေး တယ် .. ဘာပဲ သုံးသုံး အား လုံး ကို Brand တစ်ခု ထဲ သုံး ပါ လို့အကြံပြုချင် တယ် .. တော် ကြာ bra ခေါင်းချောက် သွား မှာ ဆို လို့ 
22 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 30th December 2010, 8:07 am
ကျွန်တော်ကတော့Netgear wireless access point ကိုလွှင့်တဲ့နေရာမှာထားပြီးEdimax wireless ကို Repeator နေရာထားပြီးပြောင်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့...Edimax wireless Ap မှာUniversal Repeator mode ပါပါတယ်...။
23 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 25th April 2011, 4:31 pm
wireless လွတ်ထားတာကို Access point ခံပြီးသုံးချင်လို့ပါ..Access point ကိုဘယ်လို configure လုပ်ရလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ။ကျနော်ဝယ်ထားတဲ့ Access point က TP-Link wireless outdoor CPE
Mode No. TL -WA5210G ပါ။ပြီးတော့ ဒီစက်နှစ်လုံးကို ဘယ်လို Point to Point လုပ်ရလဲသိချင်ပါတယ်။
ကျနော်ကအင်တာနက်ဆိုင်ကလိုင်းကိုယူသုံးချင်လို့ပါ အင်တာနက်ဆိုင်မှာက Tp-link နဲ့wireless လွတ်ပေးထားတယ်ပြောလို့ပါ အဲဒါကျနော်အိမ်ကနေပြီတော့ tp-link နဲ့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးသိချင်လို့ပါ
24 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း on 25th April 2011, 9:00 pm
လိုင်းတစ်ခုကိုချိတ်ဖို့သိထားရမှာလေးတွေရှိပါတယ်
အရေးအကြီးဆုံက key ပါ wep ဖြစ်ဖြစ် wpa ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
key မသိရင် ဘယ်လိုမှချိတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
နောက်တစ်ခုက IP ပါ
IP မသိရင်လည်းချိတ် လို့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်ချိတ်မယ့် network က ဘာIP ကိုသုံးထားလဲ
ဘယ် IP တွေကမအားဘူးလဲ
gateway IP ကဘာလဲ
ဘယ် IP တွေကို အင်တာနက် သုံခွင့်ပေးထားလဲ ဆိုတာ
သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့် AP ရဲ့MAC ကို ဆိုင်ရှင်ဖက်မှ ချိတ်ခွင့်ပြု ထားဖို့ လဲ
(DHCP သုံးတဲ့ network ဆိုရင်တော့ တချို့ အချက်တွေမသိလည်းချိတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်)
ကို depersoe ရေ အဲ့ဒါတွေ သိတယ်ဆိုရင် စပြီးချိတ်လို့ ရပြီပေါ့ဗျာ
25 Re: Wireless Access Point တစ်ခုကို Repeator အနေနဲ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်း